सामाजिक संजालमा अनिल र अनुरागको आरोप–प्रत्यारोप – साँचो खबर
सामाजिक संजालमा अनिल र अनुरागको आरोप–प्रत्यारोप
सामाजिक संजालमा बलिउडका कलाकारहरु ट्रोलको शिकार मात्र बन्दैनन्, एक अर्कासँग वाकयुद्ध पनि गर्छन् । नायक अनिल कपुर र निर्माता अनुराग कश्यपको ट्विटरमा देखिएको कटाक्षले धेरैको ध्यान तानेको छ ।
आइतबार अनिलले ‘दिल्ली क्राइम’को एम्मी अवार्ड पाएको खुशीमा ट्विट गरेका थिए । उनले लेखेका थिए–‘मैले पहिले पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि भन्छु कि, यो अवार्डको लायक दिल्ली क्राइमको टिम छ । आफ्नै मानिसहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय पहिचान मिलेकोमा खुशी लागेको छ ।’ अनिलको यो ट्विटमा जवाफ दिदै अनुरागले लेखे–‘कुनै लायक मानिसलाई अन्तरराष्ट्रिय पहिचान मिलेकोमा खुशी लागेको छ । साच्चै, तपाइको अस्कर कता छ ? छनै नी ? हो र…नोमिनेशन ?’
अनुरागको जवाफ चित्त नवुझेपछि अनिलले लेखे–‘तिमी अस्करको नजिक आयौं, टीभीमा स्लमडाग मिलियनेयरले टीभीमा अस्कर जितेको हेरिरहेका छौ । तिमीबाट यो हुँदैन ।’ अनुराग रोकिएनन् । उनले लेखे–‘हेड मी डाउन चलचित्रका किंग के भन्छन् ? के तपाई यो चलचित्रका लागि पनि दोश्रो विकल्पमा हुनुहुन्थेन ?’
अनुरागलाई जवाफ दिदै अनिलले लेखे–‘हेड मी डाउन अथवा पिक मि अप, मलाई केही पनि फरक पर्दैन । काम मात्र काम हुन्छ । तिमी जस्ता काम खोज्ने बेलामा कपाल त तान्नुपर्दैन ।’ अनुरागले यसमा पनि जवाफ दिदै लेखे–‘सर कपालको बारेमा केही नभन्नुहोस् । तपाइलाई त आज पनि तपाइको कपालकै कारण चलचित्र मिलिरहेको छ ।’
अनिलले आफ्नो करिअर ४० बर्षदेखि यसै नचलेको भन्दै आफ्नो जस्तो करिअर पाउन अनुरागमा खुबी हुनुपर्ने भन्दै कटाक्ष गरे । अनिल र अनुरागको ट्विटको बिषयमा बलिउड मिडियामा झगडाको खबर फैलिएपछि अनुरागले ट्विट गर्दै यसलाई नयाँ वेव सिरिजको प्रमोशन भनेका छन् । अनिल र अनुरागको ‘एके भर्सेस एके’ नामक वेव सिरिज सार्वजनिक हुँदैछ ।
Previous: यस्तो छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा दिएको शुभकामना सन्देश
Next: जोसुकैले भ्रष्टाचार गरे पनि अपराध नै हो : प्रधानमन्त्री ओली